नेपालले आज हङकङसँग खेल्दै, पारस र सन्दीप घातक ! | NepalDut
नेपालले आज हङकङसँग खेल्दै, पारस र सन्दीप घातक !
ओमानमा शनिबारबाट सुरू भएको पाँच राष्ट्र सम्मिलित टि-ट्वान्टी अन्तर्राष्ट्रिय सिरीजमा नेपालले आज हङकङसँग खेल्दैछ ।
हङकङ र नेपाल एक अर्काका चिरपरिचित प्रतिद्‍वन्द्वी हुन । ओमानको अल अम्रेट क्रिकेट मैदानमा नेपाल र हङकङबीचको खेल पौने चार बजेबाट सुरू हुनेछ । दुवै टोली एकअर्कासँग जित निकाल्ने योजनामा हुनेछन ।
केही समयअघि मात्रै हङकङका स्टार व्याट्सम्यान अंशुमन रथले त्यहाँको राष्ट्रिय टोली छाडेका थिए । उनले टोली छाडेपछि हङकङको व्याटिङ कमजोर भएको अनुमान क्रिकेट विश्लेषकहरुको छ । शनिबार भएको पहिलो खेलमा हङकङ ओमानसंग ७ विकेटले पराजित भएकाले थप दबाबमा हुनेछ । हालसम्म नेपाल र हङकङ टी–ट्वान्टी खेलमा ७ पटक भिडेका छन ।
तर ती खेलमा हङकङ ४ पटक र नेपाल एकपटक मात्रै विजयी भएको छ । तर पछिल्लो समय नेपाली टोली राम्रो लयमा देखिएको छ । हङकङविरुद्धको खेलमा नेपालका कप्तान पारस खड्का र लेग स्पीनर सन्दीप लामिछाने घातक बन्नेसक्ने सम्भावना छ ।
पारसले केही दिनअघि मात्रै सिंगापुर विरुद्ध पहिलो टि–ट्वान्टी शतक प्रहार गरेर किर्तीमान कायम गरेका थिए । विश्वका महत्वपूर्ण टि–ट्वान्टी लिग खेल्दै आएका सन्दीप लामिछानेविरुद्ध हङकङका खेलाडीको परिक्षा भने हुनेछ ।
पारस खड्काले पछिल्ला ८ टि–ट्वान्टी अन्तराष्ट्रिय खेलमा एक शतकसहित ५८ दशमलव ८३ को औषत र १५५ को स्ट्राइक रेटमा ३५३ रन बनाएका छन । समग्रमा २३ ओटा टि–ट्वान्टी अन्तराष्ट्रिय करियरमा ६४३ रन बनाएका छन ।
सन्दीप लामिछानेले पनि पछिल्ला ९ टि-ट्वान्टी अन्तराष्ट्रिय खेलमा ६ दशमलव ९ को इकोमनीमा १६ विकेट लिएका छन । सिंगापुरमा भएको सिरीजमा समेत सन्दीप उत्कृष्ट लयमा देखिएका थिए ।
हङकङका निजामत खान समेत नेपालका लागि खतरा हुनसक्छ । खान हङकङको टोलीका महत्वपूर्ण खेलाडी हुन ।
नेपालले हङकङपछि नेदरल्याण्डसँग सोमबार खेल्नेछ । ओमानले आयोजना गरेको सिरिजमा नेपाल, ओमान, हङकङ, नेदरल्याण्ड र टेष्ट राष्ट्र आयरल्याण्ड रहेका छन् ।